Zimbabweans line up to vote at the Fitchela primary school in Kwekwe, Zimbabwe Monday, July 30, 2018. Zimbabweans on Monday voted in their first election without Robert Mugabe on the ballot, a contest that could bring international legitimacy and investment or signal more stagnation if the vote is seriously flawed. (AP Photo/Jerome Delay)
Zimbabweans line up to vote at the Fitchela primary school in Kwekwe, Zimbabwe, Monday, July 30, 2018. The vote will be a first for the southern African nation following a military takeover and the ousting of former longterm leader Robert Mugabe. (AP Photo/Jerome Delay)
People wait in a queue to cast their vote at a polling station in Harare, Zimbabwe, Monday, July 30, 2018. Zimbabweans on Monday voted in their first election without Robert Mugabe on the ballot, a contest that could bring international legitimacy and investment or signal more stagnation if the vote is seriously flawed. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa casts his vote for the presidential elections at the Sherwood Primary School in Kwekwe, Zimbabwe, Monday July 30, 2018. The vote will be a first for the southern African nation following a military takeover and the ousting of former longterm leader Robert Mugabe. (AP Photo/Jerome Delay)
A man casts his vote at a polling station in Harare, Zimbabwe, Monday, July 30, 2018. Zimbabwe votes in an election that could, if deemed credible, tilt the country toward recovery after years of economic collapse and repression under former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A woman prays outside a polling station in Harare, Zimbabwe, Monday, July, 30, 2018. Zimbabweans are voting in their first election without Robert Mugabe on the ballot, a contest that could bring international legitimacy and investment or signal more stagnation if the vote is seriously flawed. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa casts his vote at a polling station in Harare, Zimbabwe, Monday, July 30, 2018. Zimbabwe votes in an election that could, if deemed credible, tilt the country toward recovery after years of economic collapse and repression under former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwes main opposition leader Nelson Chamisa, left, greets supporters after casting his vote at a polling station in Harare, Zimbabwe,Monday, July 30, 2018. About 5.5 million people are registered to vote in this southern African nation. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Former Zimbabwean Leader Robert Mugabe, center, arrives to cast his vote at a polling station in Harare, Zimbabwe, Monday, July 30, 2018. Zimbabweans are voting in their first election without Robert Mugabe on the ballot, and with some 5.5 million people registered to vote. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)